Ithegi: ubuntlola boluntu | Martech Zone
Ithegi: ubukrelekrele kwezentlalo
Ndiqala njani kwimidiya yoluntu? Lo ngumbuzo endiqhubeka nokuwufumana xa ndithetha ngempembelelo yemithombo yeendaba zentlalo kwishishini 'kwimizamo yokuthengisa. Kuqala, masixoxe ngokuba kutheni inkampani yakho ifuna ukusebenza kwimidiya yoluntu. Izizathu zokuba amashishini asebenzise ukuThengisa iMidiya yokuNxibelelana Nantsi ividiyo ebalaseleyo yokuchaza ngeendlela ezi-7 zokuthengisa kwakho kwimidiya yoluntu kunokuqhuba iziphumo zeshishini. Uqala njani ngeNtlalo
Amashishini azama rhoqo ukufaka idatha kwithemba kunye nabathengi kuzo zombini ukufumana kunye nokutsala isikhokelo, kwaye emva koko ukugcina kunye nokuthengisa abathengi abafumanayo. Kukho itoni yetekhnoloji phaya ukuzama ukubamba le datha. Eminye imithombo ayichanekanga kwaye eminye iphelelwe lixesha. Kubi kakhulu ukuba bekungekho mthombo wolwazi oqhubeka ngokuhlaziywa ngokuchanekileyo kwaye rhoqo ngabantu. Nantsi lapho! Abantu bahlala bemka rhoqo
Ukuphosa kuninzi lophando endilubonayo kwi-Intanethi yimeko yeenkcukacha-manani ezibonelelweyo. Ndifumanisa ukuba amanani-manani alahlekisa (rhoqo ngenjongo) kwaye asekwe kwiifestile zeemeko ezifanelekileyo okanye iziganeko ezingaqhelekanga. Nangona kunjalo, kwabelwane ngazo nangayiphi na indlela. Kwimeko apho, ndiqinisekile ukuba phantse naluphi na uhlobo oluphakathi luya kukuxelela ukuba banembuyekezo elungileyo kutyalo-mali. Akunakwenzeka ukuba wonke umntu abe ngowona ogqwesileyo… kwaye okona kubaluleke kakhulu, kokona kulungileyo kukuzithoba.
INewBrandAnalytics isungula iPulse, ubuNene beXesha leNtlalontle
NgoLwesine, uJuni 26, 2014 NgoLwesine, uJuni 26, 2014 Douglas Karr
INewBrandAnalytics (nBA) isungule iPulse, iqonga elisekwe kwilifu elinceda abathengi abanjengoMcDonald's, Bridal's David, Impahla yezeMidlalo ye-DICK kunye ne-Subway ukufumana ukubonakala kwexesha langoku kwizihloko ezihamba kunye neencoko ezichaphazela uphawu lwazo kunye nemveliso. Pulse kubandakanya isoftware yokuphulaphula ekuhlaleni eqokelela amagqabantshintshi kunye neencoko, inikezela ngedatha yokuhamba kwaye ivumela uphawu ukuba lusabele ngexesha-lokwenyani. I-Pulse inezinto ezintathu ezichazayo: Ukufumanisa kwangoko kunye nenkqubo yokulumkisa-I-Pulse ngokuzenzekelayo ithumela isilumkiso sokuchonga
NgoLwesihlanu, ngo-Ephreli 12, 2013 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
INewBrandAnalytics ihambisa izisombululo zobuntlola kwindawo yokutyela, ukubuk 'iindwendwe, urhulumente kunye nemizi mveliso yokuthengisa. Bachaza kwaye bahlalutya imiqobo yeengxelo zosasazo lwentlalo kwaye bayiguqulele ekuqondeni kokusebenza kwinqanaba lendawo, lommandla kunye nelophawu lwabathengi babo. Nalu ushwankathelo lwendlela i-nBA esetyenziswa ngayo kwiShishini lokutyela: i-nBA Insight iqokelela kunye neenkqubo ezinkulu zeengxelo ezingasalungiswanga kwimidiya yoluntu malunga neshishini lakho kwinqanaba lengingqi, lengingqi, kunye negama, ukuze ukwazi